Igbu ọchụ Benuwe: Ike ekpere otu nkeji maka ndi nwụrụ anwụ agwụla anyị – hoo!haa!!
Abụja: Osote onyeisi ụlọ nzukọ omeibeiwu ukwu (Sineti) Naịjiriya, Sinetọ Ike Ekweremadụ nọrọ ụnyahụ kwuo na ike ekpere otu nkeji maka ndi aka ha dị ọcha ndi ogbu ọchụ ndi Fulani na-akwafu ọbara ha agwụla ndi Sineti.
Ekweremadụ kwuputara iwe juru ya n’obi maka etu esiri ala ndụ ụmụafọ Naịjiriya n’iyi na Steeti Benuwe na Taraba, ma kwukwaa na ndi Naịjiriya ga-ebulata ụzọ nwee udo nakwa ezi nchekwa tupu ekwuwa okwu maka mmepe obodo nakwa akarangwa eji enyere-ndụ -aka.
“Ọ bụghị sọọsọ ndi Sineti ka ọnọdụ a na-echu ụra, ọ na-echukwa ndi Naịjiriya ndi ọzọ ụra. ”
N’otu aka ahụ, Sineto Dino Melaye na-anọchite anya mpaghara Ọdịda Anyanwụ Kogi katọkwara ya bụ ajọ ọnọdụ,”Ikpe nkwụmọtọ dịzị ụkọ na Naịjiriya, taa. Onye isiala nakwa Osote ya kwesịrị ịkwudosi ike mee kaikpe nkwụmọtọ dị ire” Sinetọ Gemade, n’okwu nke kwuru sị, ” Kọmishọna ndi uwe ojii, onye Nlekọta DSS nakwa Ọchịagha ndi agha na Benuwe Steeti, ha nile e dewo akwụkwọ mkpesa zigara Abụja na ha ma ndi na-ele ndi omekome a si mba ọzọ ọbịa”
Sinetọ Bukọla Saraki, onyeisi Sineti Naịjiriya n’okwu ya gosiri mwute ya na ya bụ ajọ ọnọdụ, ” Ndi otu m ndi kwesịrị ịkwanyere ugwu, unu ga-ekwenyere m na ọbara a na-akwafu n’akụkụ ala anyị ụfọdụ, ọkacha na Benuwe dị mma ichemiri echiche. “Anyị na-akatọ ogbugbu ndia n’ebe ọ dị ukwuu ma na-ekwuputa na udiri ịkwafu obara a bụghị ihe ejiri mara anyị. A na m’ezigakwara ndi Benuwe ozi iti aka n’obi”
Previous Post: Onye ogbuanụ sụgburu ibe ya n’Enugwu
Next Post: ỤKWỤ